Xayawaanka Xeebta Theo Jansen ee Surreal | Abuurista khadka tooska ah
Melisa Perrotta | | Fanaaniin, Sawirro, Dhiirrigelinta
Tan iyo 90-yadii, farshaxanistaha reer Holland Theo Jansen wuxuu xirfaddiisa u hibeeyay dhisidda xayawaanno cajiib ah. Kuwaas mishiinada iswada ayaa la yiraahdaa "Strandbeest" ama "xayawaanka xeebta" Isbaanishka. Waxay isbeddeleen sanadihii la soo dhaafay si ay u buuxiyaan xeebaha ayna uga qayb qaataan daryeelkooda.
Mashruucan, Jansen wuxuu damacsan yahay inuu abuuro a iskudhafka farshaxanka iyo injineernimada. Sidan oo kale waxay ku qalabeysaa xoolaha iyaga farsamooyin u gaar ah akhriska deegaanka iyo dhaqdhaqaaqa. Dhinaca kale, wuxuu si faahfaahsan u daraaseeyaa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa xayawaanka si uu ugu soo saaro shaqadiisa.
Kuwani xayawaannada waaweyn surreal waxaa loogu talagalay in si hab in ay u guuraan si madaxbanaan mahad Dabaysha dabaysha iyo tamarta firfircoonida. Dhismayaasha noocan oo kale ah waxay umuuqdaan inay socdaan oo ay udhaqaaqayaan si dabiici ah, ayagoo ku dayanaya dhaqdhaqaaqa xoolaha
Astaamaheeda sharraxaadda sharraxaaddu waa mid faahfaahsan oo aad u adag. Dhismihiisu wuxuu ka dhigayaa shaqada in loo arko inay tahay qalfoof taariikh ka soo noolaaday oo nolosha ku soo noqday si hufanna ugu mahadnaqaya meesha uu ku nool yahay inay hesho dareen macquul ah.
Si kastaba ha noqotee, mashiinadani had iyo jeer ma ahan kuwo isku murugsan. Asal ahaan, waxay bilaabeen sidii qalfoof rudimentary la macaamili karin dhexdhexaadinta. Laakiin, ka dib markii isdhexgalka farsamooyinka xisaabinta isbeddelka, waxay bilaabeen inay awoodaan inay akhriyaan deegaanka. Sidaas ayey ku fahmi karayeen roobabka, duufaannada iyo jiritaanka biyaha. Sidan oo kale maanta waxay ku socdaan xeebaha Holland sida xayawaan kasta oo kale.
1.1 Caloosha dabaysha
1.3 Nidaam xasaasi ah
Xayawaanka xeebta Jansen waxaa laga dhisay dhuumaha PVC dheer, alwaax iyo shiraaq dhar. Dhammaan waxyaalahan waxay fuliyaan isla shaqooyinka muruqyada iyo xubnaha jirka dhabta ah. Sidan ayaan ku arki karnaa sida xayawaanku ugu soo noolaado dhexdooda.
Nidaamka caloosha wuxuu ku saleysan yahay bistoolado ka helaya hawo cadaadis shumaca dusheeda Waxay soo ururiyaan hawo waxayna ku keydsadaan dhalooyinka. Marka dhammaan hawo lagama maarmaanka ah la soo ururiyo, waxaa si tartiib tartiib ah loogu sii daayaa tuubooyin, ilaa bistooladaha Sidaas bistooladadu waxay dhaqaajiyaan muruqyada.
Muruqyadu waxay ka kooban yihiin tuubo ay ku jiraan mid kale oo gudaha ah, kaasoo awood u leh inuu u soo baxo ama u soo baxo. Markii hawada gala dhalooyinka iyada oo loo marayo tuubo yar, tan riixaya bistoolad dhamaadka tuubada gudaha ee muruqa si tuubadu u dheeraato. Tallaabada noocan ahi waxay u oggolaaneysaa dhaqdhaqaaq, markii si isku mid ah loogu sameeyo xayawaanka oo dhan, awood u siinaya inuu socdo.
Nidaam xasaasi ah
Mashiinnada ayaan ku qalabaysnayn nooc shucuur elektaroonik ah. Taas bedelkeeda, si ay ula falgalaan deegaankooda, waxay adeegsadaan oo keliya farsamayn kara akhri xaddiga biyaha ku jira gudaha tubooyinka. Sidan oo kale, markii xayawaanku aad ugu dhow yahay xeebta, tuubooyinkiisa daadadku waxay hawlgeliyaan farsamo ka dhigaysa inuu ku laabto xeebta. Taas bedelkeeda, haddii aad ka durugto ciidda qoyan, aaladda ayaa mar labaad la hawlgeliyaa si loo soo jeesto.
Halkan waxaan kaaga tagnay muuqaal si aad wax badan u aragto:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Theo Jansen's Xayawaanka Xeebta Surreal
Kalluunka Sheldon dijo
Layaab la'aan * 0 * Waad ku mahadsantahay wadaagida Melisa
Ku jawaab SheldonElPez
Sida loo abuuro sumadeeye lambar bogga 'Indesign'
Tilmaamaha ugu dambeeya ee midabada labaad